ဖုန်းမြည်သံများကို iTunes မှ iPhone သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။ ၁၂.၇ အိုင်ဖုန်းသတင်း
iTunes 12.7 မှဖုန်းမြည်သံများကို iPhone သို့ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းနည်း
Apple ၏မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်း software အဆင့်တွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမှာ iTunes အတိအကျဖြစ်သည် Cupertino ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဂီတမန်နေဂျာ၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုအနည်းငယ်သက်တမ်းတိုးလိုသည် နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များက၎င်းကိုပိုမိုပေါ့ပါးပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ သို့သော်အပြောင်းအလဲသည်လူတိုင်းနှင့်မသင့်တော်ပါ။
အဲဒီအကြောင်းကြောင့် iTunes 12.7 မှ iTunes သို့ iTunes သို့တိုက်ရိုက်ဖုန်းမြည်သံများကိုမည်သို့ပေးပို့သည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်မည်သည့်ပြproblemနာမှမပါဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းကိုမြည်သံအဖြစ်ခံစားနိုင်သည်။ Actualidad iPhone အတွက်အမြဲတမ်းမြန်ဆန်လွယ်ကူသောသင်ခန်းစာ။
ပထမတစ်ခုကသင်လိုအပ်မည့်အရာများကိုသတိရရန်ဖြစ်သည် အသံဖိုင် format နဲ့ .m4r, ဒီအဘို့ငါသင့်ရဲ့ website ကိုသွားအကြံပြုပါသည် ZEDGE သင့်ရဲ့ iPhone အတွက်သင့်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့စတိုင်အားလုံးရဲ့အရေးအပါဆုံးသီချင်းများ၊ လူကြိုက်အများဆုံးသီချင်းများကိုသင်ဘယ်မှာရှာမလဲ။
iTunes 12.7 မှ iPhone သို့ဖုန်းမြည်သံကိုလွှဲပြောင်းပါ
၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမလွယ်ကူခဲ့ပါ၊ သင်ခန်းစာသည်လုယက်လုနီးပါးဖြစ်နေပုံရသည်။ ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် format နဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖိုင်ရှိသည် .m4r iTunes ကိုဖွင့ ်၍ iPhone နှင့် USB မှတဆင့် PC / Mac သို့သာဆက်သွယ်ရမည်။ အရာအားလုံးကိုညှိပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဖွင့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်စရာများစွာအနက်မှတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည် အသံ, ငါတို့ကလစ်နှိပ်ပါတာပေါ့အဲဒီမှာပါပဲ။
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းထက်ပိုများသည်။ iPhone ကိုကေဘယ်ကြိုးနဲ့မဖြုတ်ဘဲဂီတဖိုင်ကိုအဲဒီဖိုင်တွဲထဲမှာဆွဲတင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနှင့်သွား၏ ချိန်ညှိချက်များ> အသံများ> ဖုန်းမြည်သံ အပေါ်ပိုင်းတွင် iTunes မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သောအသံကိုတိတိကျကျမြင်ရလိမ့်မည်။ ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲ iOS အတွက် ringtone အနေနဲ့သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကိုရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iTunes 12.7 မှဖုန်းမြည်သံများကို iPhone သို့ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းနည်း
Dario နှင့် ဟုသူကပြောသည်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ အကြောင်းကြားစာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်၊ WhatsApp အတွက်စိတ်ကြိုက်သေံကိုအသုံးပြုချင်တယ်
Dario Castillo ဟုသူကပြောသည်
Dario Castillo သို့ပြန်ပြောပါ
ငါကလွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်မယုံနိုငျ !! ငါ iTunes မှာရှိတဲ့ ringtone tab ပေါ်လာတယ်၊ ငါ့ဖုန်းကို update မလုပ်တဲ့အတွက်ငါမသွားမှီတိုင်အောင်သူတို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
claudio dimanche ဟုသူကပြောသည်
ငါ extension ကိုဆွဲယူသောအခါသူကမူရင်းဖိုင်ကိုမတှေ့ဘူးငါ့ကိုပြောတယ်
claudio dimanche အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာနံနက်စာ၊ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးပါပြီ
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ ... မိုဘိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်သောဖုန်းမြည်သံများကိုသင်မည်သို့တည်းဖြတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်မည်နည်း။ မြှားများဝှက်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မလိုအပ်သော (သို့) မလိုချင်သည့်သံစဉ်များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုမမြင်သောကြောင့် ရှိပြီးသား ...
iTunes ရှိအသံ tab သို့အသံပို့လိုသောအခါသင်၏ရှင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။
သင်သည် "ဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကိုယ်တိုင်စီမံခြင်း" အကွက်ကို check လုပ်ပြီး 'Apply' ခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင်သင်၏ကိရိယာမှ (iTunes ရှိ) ဖုန်းမြည်သံကိုရွေးနိုင်ပြီးဖျက်ရန်သော့ကိုနှိပ်ပါ (အတည်ပြုရန်သင်အားတောင်းလိမ့်မည်။ ) ဖိုင်) ။
သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ iTunes တွင်။
ယခုတွင်သင်သည် iTunes ဖြင့်ဖုန်းမြည်သံများကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Ariel vargas ဟုသူကပြောသည်
iPhone ကို iTunes နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါ sidebar မှာဘာလို့မပေါ်လာတာလဲ။
Ariel Vargas အားပြန်ပြောပါ
Ethan လိုပဲကျွန်မလည်းအတူတူပါပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ desktop ပေါ်တွင် m4r ဖိုင်ရှိသည်။ ၎င်းကို ringtones folder သို့ဆွဲယူသောအခါဖုန်းသည် ringtone ကို iphone ထဲသို့ကူး။ မရပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်း iphone တွင်မဖွင့်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ငါမွန်းလွဲပိုင်း၌ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလုပ်နေခဲ့ပြီးသောနောက်ဆုံး, သင်၏ရှင်းပြချက်ကိုကျေးဇူးတင်ငါအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
Black Ice ကိုပြန်သွားပါ
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ .m30r format ဖြင့် ၃၀ ထက်နည်းသောအသံသည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာကိုနှိပ်လိုက်သည်နှင့်ဖုန်း၏ဖိုလ်ဒါသို့သေတ္တာကိုဆွဲယူသောအခါဘာမျှဖြစ်မလာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုဖိုင်တွဲထဲမထည့်ပါ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ (သို့) လေသံထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုပြောပြပေးနိုင်မလား။
သင့်မှာ MAC ရှိရင်။ ITUNES နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်ဖုန်းများ !!! Tones အားလုံးသည်၎င်းတို့ကို desktop ပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် FINDER တွင် tab ရှိ GO ကိုသွားပြီး Home> Home » MUSICA folder သို့သွားပါ။ ထို့နောက် ITUNES ဖိုင်တွဲသို့၊ ITUNES MEDIA ဖိုင်တွဲသို့သွားပါ၊ Desktop တွင်ရှိသည့် Tone များအားလုံးကို“ TONES” ထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကို“ folder” သို့ဆွဲယူလိုက်ပါ။ ဤဖုန်းနံပါတ်များတွင်ရှိသည်။ “ TONES” ၏စာဖတ်သူသည်“ TONES” ၏စာဖတ်သူသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိမည်၊ သင်၏ IPHONE သို့ကူးယူပြီး၎င်းသည်အလိုအလျောက် Syncronized ဖြစ်ရမည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောအရာများကိုထည့်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုလက်ဖြင့်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အိုင်ဖုန်းပေါ်၌ပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ iTunes ဖိုင်တွဲသို့ကူးယူခြင်း၊ ဖိုင်တွဲပြောင်းခြင်း၊ ... မဟုတ်သောအရာငါကြာချိန်ပိုလျှံသည်မဟုတ်တိုတောင်းသောကြာချိန်အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှငါသေံတစ်ခုတည်းမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။
Miguel Valero ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် iPhone တွင် ၄ နှစ်မှယနေ့အထိ ၇ နှစ်ကြာဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် ၈ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိရှိမည်မဟုတ်၊ အခြားမည်သည့်အရာမျှရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသင့်ကိုအာမခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖုန်းတစ်လုံးအနေဖြင့်ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Iphone4ရှိသည့်နေရာတွင်သေတ္တာတစ်လုံးတည်းလုပ်သည့်အတွက်သူတို့သည်တူညီသောလေသံဖြင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ အခုငါ့ဂီတသံကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ ၂ နာရီကြာတယ်။ Samsung မှာ ၂ မိနစ်ကြာတယ်။ နေ့တိုင်းကပိုခက်တယ်၊ မွမ်းမံမှုတစ်ခုစီကမင်းတို့သေတ္တာကိုဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငါဖုန်းမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးငါကြာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမွမ်းမံခြင်းမတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုမပြောဘဲ၎င်းသည်တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံး update တွင်၎င်းတို့အားအလွန်နှေးကွေးစေမည့်အရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဘက်ထရီကချက်ချင်းပဲထွက်သွားတယ် ?????
Miguel Valero အားပြန်ပြောပါ
Ethan I ဆွဲလိုက်သလိုမျိုးကျွန်တော်ဟာဖြစ်ပျက်ပေမဲ့ကူးမထားဘူး။ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ "link" လို့ပြောပြီးအဲဒါကျွန်တော့်ဘေးမှာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ ငါ့မှာပြတင်းပေါက် ၇ ရှိတယ်
Apple က iOS 11.0.1 ကိုလွှတ်လိုက်ပြီ
iFixit က Apple TV 4K အသစ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ